दंगा नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागी १३ भन्दा बढी कैदीको मृत्यु ! - Damak No.1 Online Patrika
दंगा नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागी १३ भन्दा बढी कैदीको मृत्यु !
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, कार्तिक २३, २०७५
ताजिकस्तान। एक जेल भित्र भएको दंगा नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागी कम्तिमा १३ जना कैदीको ज्यान गएको छ। घटना ताजिकस्तानको खुजाद भएको हो। घटनामा परी १३ जनाले ज्यान गुमाएको सुरक्षा अधिकारीले बताएपनि अन्य जानकारी भने वाहिर आएको छैन।
त्यसैगरि संयुक्त राज्य अमेरिकाका लस एन्जल्सस्थित एउटा रात्रिक्लवमा गोली प्रहार हुँदा एक प्रहरी अधिकारीसहित कम्तिमा १२ जनाको ज्यान गएको बिहीबार क्यालिफोर्नियाको प्रहरीले जनाएको छ ।
भेन्चुरा काउन्टीका सेरिफ जिअफ डिनले सञ्चारकर्मीलाई दिएको जानकारी अनुसार मारिनेमा बन्दूकधारी आक्रमणकारी पनि रहेका छन् । आक्रमणकारी ती व्यक्तिको पहिचान खुलिसकेको छैन । प्रहरीलाई गोलकाण्डको उद्देश्यका बारेमा पनि केही थाहा हुन नसकेको तर अनुसन्धान जारी रहेको डिनले बताए ।
अमेरिका र इरान युद्धतर्फ !
अभिनाश प्रतियोगिताकै उत्कृस्ट खेलाडी, करन बने प्लेयर अफ द म्याच
लिम्बुवान नागरिक समाज बेलायतको अध्यक्षमा वनेम
श्रीमतीले यौनसम्पर्क गर्न नदिएको झोँकमा चक्कुले काटे आफ्नै लिङ्ग काटेपछि..
मूल्य वृद्धिको विरोधमा फ्रान्समा भएको प्रदर्शनमा एकको मृत्यु
संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच हात हालाहालदेखि लात हानाहानसम्म !